आफ्नो प्रेमलाई पाउन दुवैले विद्रोह गरे, « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्य » आफ्नो प्रेमलाई पाउन दुवैले विद्रोह गरे,
आफ्नो प्रेमलाई पाउन दुवैले विद्रोह गरे,
धनाढ्य घरानियाँ परिवारकी केटी र चप्पल पड्काउँदै सडकमा हिँड्ने केटो । कथित उच्च जातकी युवती र दलित समुदायका युवा । उनीहरूबीच विवाह भयो भने समाजमा कस्तो खालको तरंग उत्पन्न होला ?
यसको जवाफ छ– गायक तथा अभिनेता यशकुमार र उनकी पत्नी रिता शाहीसँग । उनीहरूको विवाह त्यतिवेला भयो, जतिवेला अन्तरजातीय विवाहबारे सायदै कसैले कल्पना गर्थे ।
प्रेमले जात खोज्दैन, धर्म, वर्ग, स्तर हेर्दैन । प्रेमको यही परिभाषाले होला दलित समुदायका यशकुमार र नेवार समुदायकी रिता नजिकिए र हजार काँडाहरूलाई पन्छाउँदै विवाह बन्धनमा बाँधिए ।
काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने यशकुमार र उनको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । यशकुमार सँग थियो त केवल कलाकार बन्ने सपना मात्र । त्यही सपनालाई साकार पार्न उनी दैनिकजसो बागबजारको एक स्टुडियोमा पुग्थे । गीतको लिरिक्स लेक्थे, संगीत भर्थे । त्यही बागबजारमा यशकुमारको सपनाकी राजकुमारी भेटिइन्, रिता ।
हुन त त्यसभन्दा पहिले नै यश र रिताको भेट नभएको होइन । तर, त्यो भेट यशकुमारका लागि यादगार थिएन । यशकुमार गीत गाउन हाइस्कुलमा पुगेका रहेछन् । जहाँको दर्शकमध्ये रिता पनि एक थिइन् । त्यही कार्यक्रमको सेतुले नै उनीहरूको चिनजानको दायरा फराकिलो बनाइदियो ।
दिनहरू बढ्दै जाँदा उनीहरूको मित्रताको दूरी पनि नजिकिँदै गयो । जहाँ यशकुमारको साथीको स्टुडियो थियो, त्यसैअगाडि एउटा ठूलो विल्डिङ थियो, रिताको परिवारको । झ्यालको छेको हुँदै उनीहरूका आँखा ठोकिन्थे । पछिपछि त रिताको बास झ्यालमै हुन थाल्यो । त्यो यसकारण कि यशकुमार र रिता एक नजरका लागि भोका थिए । तर, न यशकुमारले रितालाई प्रपोज गरे, न रिताले नै । प्रपोजविनै उनीहरू फिल्म हेर्न पुगे, स्वयम्भू, पशुपति पुगे । प्रपोजविनै उनीहरू एक–अर्कामा अन्तरघुलित भइसकेका थिए । यशकुमार भन्छन्, ‘उनले मप्रति गर्ने व्यवहार, देखाउने सदासयता, सहयोग नै मेरा लागि स्वागत थियो । सायद उनले पनि त्यस्तै ठानिन् कि ?’
जहाँ यशकुमारको साथीको स्टुडियो थियो, त्यसैअगाडि एउटा ठूलो विल्डिङ थियो, रिताको परिवारको । झ्यालको छेको हुँदै उनीहरूका आँखा ठोकिन्थे । पछिपछि त रिताको बास झ्यालमै हुन थाल्यो । त्यो यसकारण कि यशकुमार र रिता एक नजरका लागि भोका थिए । तर, न यशकुमारले रितालाई प्रपोज गरे, न रिताले नै ।
त्यसपछि त यशकुमारले एक दिन मात्र फोन नगर्दा पनि रिता दुःखी हुने भइन् । यशकुमारलाई पनि रिताको बानी परिसकेको थियो । फोनको आवश्यकता पूरा गर्न रिताले यशकुमारलाई ‘पेजर’ गिफ्ट दिइन् । नेपालमा मोबाइल प्रविधिको प्रवेश हुनुभन्दा पहिले पेजरको चलन थियो । तर, यशकुमारसँग महँगो गिफ्ट दिने क्षमता थिएन । भन्छन्, ‘मैले सानो चाँदीको औँठी गिफ्ट दिएको थिएँ ।’ एक सय ५० रुपैयाँको त्यही सानो चाँदीको औँठीमा बहुमूल्य माया भरेर दिएका थिए, यशकुमारले ।
उनीहरूको सम्बन्धबारे कसैले ‘चुँ’सम्म थाहा पाएका थिएनन् । रिता र यशकुमारको पहिलो भ्रमण थियो, पशुपति । १२ कक्षामा पढ्दै गरेकी रिता कलेज ड्रेसमै थिइन् । यशकुमार त्यो घटना स्मरण गर्दा अहिले पनि रोमाञ्चित हुन्छन्, ‘हामी बसिरहेको ठाउँमा दुईजना प्रहरी आए र सोधी–खोजी गर्न थाले । हामी दुवैजना त्रसित थियौँ । मलाई यस मानेमा पनि डर लागि रहेको थियो कि समाजमा उनको छुट्टै इज्जत थियो । मलाई त जे भए पनि के नै फरक पथ्र्यो र !’
त्यसैले मैले प्रहरीसामु अनेक बिन्ती गरेँ । अँ हँ मानेनन् । लास्टमा प्रहरीले मलाई २० पटक उठबस गर्न भन्यो । मसँग विकल्प थिएन, गरेँ ।’
केही समयपछि यशकुमारलाई मोडलिङको अवसर आयो । रितालाई यो कुरा मन परेन । आखिर यशकुमारले बेहाल भयो जिन्दगी यो बोलका गीतमा मोडलिङ गर्ने नै भए । यशकुमार सुनाउँछन्, ‘त्यतिवेला कलेज जान हिँडेकी छोरी दिनभरि मसँग बसेकी थिइन् । सुटिङ राति सम्म हुँदा पनि उनी मसँगै भइन् । बदमासी गर्छ भन्ने ठूलो डर रहेछ उनमा ।’
उनीहरू प्रेममा त थिए । तर, उनीहरूको प्रेम समाजका लागि अपाच्य थियो । त्यो जातीय हिसाबमा वा वर्गीय रूपमा नै किन नहोस् । साँच्चै अब बिहे कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्नले घरिघरि उनीहरूलाई सताइरहन्थ्यो ।
मैले प्रहरीसामु अनेक बिन्ती गरेँ । अँ हँ मानेनन् । लास्टमा प्रहरीले मलाई २० पटक उठबस गर्न भन्यो । मसँग विकल्प थिएन, गरेँ ।’केही समयपछि यशकुमारलाई मोडलिङको अवसर आयो । रितालाई यो कुरा मन परेन ।
०५८ सालको कुरा हो, एक दिन रिता भागेरै यशकुमार कहाँ आइन् । विलासिताको जीवन छोडेर यशकुमारसँगै जीवन बिताउन तयार भइन् उनी । यशकुमारले जति सम्झाउँदा पनि मानिनन् । यो कुरा रिताको परिवारले थाहा पाएपछि बबन्डर भयो । यशकुमारलाई धम्की आए, परिवार–परिवारबीच झगडा भयो, के–के भयो के–के ।
एक सातापछि परिवारले रितालाई फिर्ता लगे । तर, रिता चुप लागेर बसिनन् । रिताको व्यवहारले यशकुमारलाई बोलाएर छोरी दिन बाबुआमा बाध्य भए । यशकुमार भन्छन्, ‘उहाँहरूले मलाई बोलाउनुभयो र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी छोरी दिनुभयो ।’
यशकुमार सेलिब्रेटी भएपछि उनको सम्पन्नताले जातको घेरा मेटाइदियो । घर–परिवारले बोलाएर पुनः प्रक्रिया पूरा गरी रिताको विवाह गरिदिए । यशकुमार भन्छन्, ‘अहिले उहाँहरूको सबैभन्दा प्यारो ज्वाइँ मै भएको छु । मेरो बुवाआमा हुनुहुन्न, त्यो रिक्तता उहाँहरूले पूरा गरिदिनुभएको छ । मैले पनि आमाबुवालाई गर्ने धर्म निभाएको छु ।’
त्यसपछि उनीहरू बीचको सम्पर्क टुट्यो । एक्ली छोरी रिता र बुवाआमाको बोलचाल, भेटघाटमा पनि ब्रेक लाग्यो ।
तर, यता रितालाई भित्र्याएलगत्तै यशकुमारको जीवन चम्कन थाल्यो । उनले पहिलो एल्बम ‘रिजन’ सार्वजनिक गरे । पूरै गीत हिट भयो । त्यसपछिका उनका गीत लगातार हिट हुन थाले र यशकुमार रातारात सेलिबे्रटी बन्न पुगे ।
आफ्नो प्रेमलाई पाउन उनीहरू दुवैले एक खालको विद्रोह गरे । आफूलाई मन पराएको र माया गरेको मान्छेसँग जीवन बिताउन पाउँदा उनीहरू मख्ख छन् । उनीहरूको प्रेमको निशानी हुन्– १२ वर्षीय (युग) ।
– See more at: http://dalitonline.com/archives/20693#sthash.tyccvYpm.dpuf
← मन्दिरमा पुजा गरेको आरोपमा दलितलाई ५ हजार तिराउने पक्राउ, आज मुद्धा दर्ता गरिदै ।	कसैले अछुतको व्यवहार गर्छन् भने उनीहरू पनि हाम्रा लागि अछुत हुन् ! →